Akụkọ - C-star 2020 & Huayuemei Lighting
C-kpakpando 2020 & Huayuemei Lighting
C-kpakpando - Shanghai International Trade Fair maka Ngwọta na nddị Ihe niile gbasara Retail, onye otu EuroShop Trade fighter ezinụlọ, toro ngwa ngwa kemgbe mmalite ya na 2015 wee bụrụ isi ihe na - emetụta ụlọ ọrụ mkpọsa na China niile.
Emere C-star 2020 nke ọma na Septemba 2-4th, 2020 na Shanghai New International Expo Center. N'ime ụbọchị atọ na-aga nke ọma, C-star nabatara ndị ngosi 134 na ndị ọbịa 9,006.
Ulo oru ire ahia nke China agabigala nnukwu mgbanwe n'ihi COVID-19 n'ime ọnwa ole na ole. China nwetara nnukwu ihe ịga nke ọma n'ịlụso COVID-19 ọgụ. Ọ bụ oge kwesịrị ekwesị ka anyị chee etu anyị ga-esi kwado maka ọganihu na-esoteHuayuemei Lighting siri ike soro na ngosi a. Ndị ọrụ ihe ngosi ahụ kwadebekwara usoro mgbochi ọrịa na ihe ngosi ahụ.
Onye ọ bụla kwesịrị iyi mkpuchi ma na-elekọta mmadụ anya. Anyị nwere otu ụbọchị iji wuo ụlọ ntu anyị. Emere C-star 2020 nke ọma na Septemba 2-4th, 2020 na Shanghai New International Expo Center. E nwere ọtụtụ ndị gara ihe ngosi ahụ.
Bolọ ntu anyị na-adọta ọtụtụ ndị mmadụ ileta, n'ihi na e gosipụtara RGB Dynamic Curtain LED na ụlọ ntu ahụ.
Onye mmebe anyị na-eji agba iji gosipụta isiokwu nke ngosi a, Ọ na-adọta anya.
Ihe niile anyị nwere ike ịmegharị, yana enwere ike ịhazi ọnọdụ agba dị ka arịrịọ gị si dị.
RGB Dynamic Curtain LED Strip ka bụ ihe na-egbuke egbuke na ụlọ ntu ahụ, ọ na-adọta ọtụtụ ndị mmadụ ịga leta ya. Ọ nakweere usoro DMX512, ma jiri njikwa K-8000C mee ihe.
Nwere ike ịmepụta ụdị ihe ị chọrọ, ị nwere ike iji Dynamic Curtain LED Strip na programmable. Nke ahụ ga - abụ ka ụlọ ntu gị bụrụ nke ukwu!
Anyị so na C-kpakpando bụ ihe dị mkpa mgbe akụ na ụba tara ahụhụ!
Ọ dị ezigbo mkpa nye anyị, ka anyị mara ozi ndị ọzọ gbasara ọkụ ọkụ, anyị ga-anwa ike anyị kachasị mma iji bulie ngwaahịa anyị mma na imepụta ngwaahịa ọhụrụ.
Ka anyị tinye nke a ma atụfula ohere gị na 2021.